Online Food Industrial Market
Phone: 09 799 770 744
Treasure3 Machinery Center
Brings valuable information and techology to you
နို့စို့ကလေးနှင့် ကလေးငယ်အတွက် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအသောက်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက် (22 May 2020)
စားသောက်ကုန်တင်သွင်းရာတွင် မဖြစ်မနေ တင်ပြရမည့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသတ်မှတ်ချက်များ (29 Apr 2020)
Labatory for Food Test by FIDSL
Vacuum Sealing Machine Buying Guide(12-5-20)
Deep Fryer Buying Guide(17-4-20)
Commercial Dough Mixer Buying Guide(14-4-20)
2020 မှာ ခေတ်စားလာမယ့် စားသောက်ကုန် ထုတ်ပိုးမှုပုံစံများ (27-4-20)
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက် Inventory management(11-4-20)
နို့စို့ကလေးနှင့် ကလေးငယ်အတွက် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအသောက်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်
၁။ “နို့စို့ကလေးနှင့်ကလေးငယ်အတွက် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအသောက်များ ဈေးကွက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်” ၏ ပုဒ်မ ၅ (ဂ) အရသော်လည်းကောင်း ၊ “နိုင်ငံတကာ မိခင်နို့ အစားထိုးစားသောက်ကုန်များ ဈေးကွက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes)” အရ သော်လည်းကောင်း မိခင်နို့အစားထိုးစားသောက်ကုန် များ၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ပြဌာန်းချက်နှင့်ငြိစွန်းသည့် Mascot ရုပ်ပုံများ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုရ။၊
၂။ မိခင်နို့အစားထိုးစားသောက်ကုန်၏ မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ထားသော Trademark Logo သည် “နို့စို့ကလေးနှင့်ကလေးငယ်အတွက် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအသောက်များဈေးကွက် တင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်”ပါ ပြဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၅ (ဂ) နှင့် ဆက်စပ်လျှင် အမှတ်တံဆိပ်စုစုပေါင်း ဧရိယာ ၏ ၁:၂၀၀ အချိုးအစားဖြင့် တနေရာ၌သာ ဖော်ပြရမည်။
၃။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက အမျိုးသားအစားအသောက်ဉပဒေ ပုဒ်မ ၃၁ အရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။
source from FDA Myanmar Back To Top | Home
စားသောက်ကုန်တင်သွင်းရာတွင် မဖြစ်မနေ တင်ပြရမည့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသတ်မှတ်ချက်များ
၁။ အသင့်ထုတ်ပိုးထားသော တင်သွင်းစားသောက်ကုန်များအား ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် အစားအသောက် ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အနည်းဆုံး (မဖြစ်မနေ) ပါဝင်ရမည့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသတ်မှတ်ချက်များ Minimum Requirement of Laboratory Parameters for Food Safety ကို သက်ဆိုင်သည့် အစားအသောက်အမယ်/အုပ်စုအလိုက် တင်ပြရမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
၂။ အသေးစိတ်စာရင်းကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.fda.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စားသောက်ကုန်များ၏ နိုင်ငံတကာအရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများကို FIDSL တွင်ဓာတ်ခွဲ စမ်းသတ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ထုတ်လပ်သော စားသောက်ကုန်များ၏ နိုင်ငံတကာအရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများကို သိရှိလိုပါက FIDSL နှင့် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသတ်မှုနည်းစနစ်များအပေါ် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုများ အပေါ် ဆွေးနွေးလိုပါက FIDSL အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် လာရောက် ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ ရယူနိုင်ပါသည်။
Nutrition Analysis Test
Coffee + Tea test
လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေေသာ အဏုဇီဝပိုး ပါဝင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း
အစားအသောက်တွင် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းနှင့် အာဟာရတန်ဖိုးများ စမ်းသပ်ခြင်း
ရေအရည်အသွေး စမ်းသပ်ခြင်း တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊
အသေးစိတ်ကို www.mfpea.org/fidsl-lab နှင့် https://www.foodindustrydirectory.com.mm/mfpea/services/laboratory/fees-and-services.html တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊
source from foodindustrydirectory Back To Top | Home
Vacuum Sealing Machine Buying Guide
Vacuum Sealer ဆိုတာ Food Preserve အတွက် အသုံးများတဲ့ စက်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်၊ အသားငါး၊ အသီးအရွက်၊ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစားအသောက်များ၊ အသီးအနှံ စတဲ့ အတော်များများ အစားအသောက်တွေမှာ Vacuum Sealer ကို သုံးနိုင်ပါတယ်၊ oxygen-free environment မှာ ဘတ်တီးရီးယား ပေါက်ပွားနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ မှိုအမျိုးမျိုး၊ ကြက်သွန်ဖြူစတဲ့ တချို့စားသောက်ကုန်တွေမှာ တော့ Vacuum Sealer ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး၊
သတိထားရမှာတစ်ခု ပြင်ဆင်ထားတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို Vacuum Seal မလုပ်ခင် အခန်းအပူချိန်မှာ လုံလောက်အောင် အအေးခံရ ပါမယ်၊
အဓိက Vacuum Sealer ( ၂ ) မျိုးရှိပြီး၊ Chamber type နဲ့ External type တို့ဖြစ်ပါတယ်၊
Chamber type က ပမာဏများများ Seal လုပ်ချင်တဲ့အခါ၊ အရည်နဲ့အရည်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို Seal လုပ်ချင်တဲ့အခါ ပိုပြီးအသုံးတဲ့ပါတယ်၊ extra attachments တွေ မလိုဘဲ သုံးနိုင်ပါတယ်၊ commercial အတွက် ပိုပြီး သင့်တော်ပြီး၊ ကြာချိန်ကနည်းပါတယ်၊ larger seal bar၊ multiple seal bars တွေကို ရွေးချယ်အသုံး ပြုနိုင်ပါတယ်၊ Chamber type က smooth-textured bags ကိုသုံးပါတယ်၊ cost per bag နဲ့ တွက်ရင်တော့ External ထက် ပိုပြီး သက်သာပါတယ်၊
External type ကတော့ တခါတရံအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ အရည်မပါတဲ့စားသောက်ကုန်တွေ အတွက် ပိုပြီးသင့် တော်ပါတယ်၊ Chamber type ထက်ပိုပြီး စရိတ်သက်သာပါတယ်၊ seal လုပ်ချိန်က ကြာပေမယ့် cost-effective ဖြစ်ပါတယ်၊ External type က mesh-textured bags ကို သုံးပါတယ်၊ cost per bag နဲ့ တွက်ရင် Chamber ထက်ပိုပြီး ကုန်ကျပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ပမာဏများများ အသုံးပြု ဖို့ မကောင်းပါဘူး၊
Vacuum Sealer ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ စဉ်းစားရမှာတွေက အိတ်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်၊ အသုံးပြု မယ့်ပမာဏ၊ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား အရည်ပါ၊ မပါ စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်၊
Vacuum Sealer ဝယ်ယူဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ Back To Top | Home
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အသုံးများတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေမှာ Fryer တွေလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ Fryer အမျိုးအစား တွေ အများကြီးထဲက Deep Fryer တွေ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်တာတွေက ..
၁) အမျိုးအစား - Countertop , Floor type, Speciality fryer တွေရှိပါတယ်၊ Countertop က အသေးကနေအကြီးအထိ ယေဘူယျသုံးဖို့ ပိုအဆင်ပြေ ပါတယ်၊ space saving, performance, convenience and safety တို့အတွက် မျှတအသုံးတဲ့ပါတယ်၊ Floor type ကတော့ volume များတဲ့အခါ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါ တယ်၊ Speciality fryer တွေကတော့ Ventless, Funnel Cake and Donut Fryers စသည်ဖြင့် သီးခြား ထူးခြားချက်တွေ ရှိပါတယ်၊
၂) Power Source - Electric နဲ့ Gas ဆိုပြီး ယေဘူယျ ရှိပါတယ်၊ Electric က safety နဲ့ install တွေမှာ အားသာချက်ရှိပါတယ်၊ Gas က oil heating up မှာ ပိုမြန်တယ်၊
၃) Fry pot styles - tube-type, open-pot နဲ့ flat-bottom type တွေရှိပါတယ်၊ အဓိကကွာတာက အနယ်ကျတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်၊ Tube-type က ကျလာတဲ့အနယ်တွေကို စစ်ထုတ် တဲ့ နေရာ ကျယ်တဲ့အတွက် အနယ်ကျတဲ့ food type တွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်၊ မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်စရာလိုပေမယ့်၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာ မှာ ပိုပြီးခက်ပါတယ်၊ food type အမျိုးမျိုးကို ကြော်ဖို့ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်၊ Open Pot က အနယ်တွေကို စစ်ထုတ် တဲ့ နေရာ ကျဉ်းတဲ့အတွက် အနယ်ကျတဲ့ food type တွေ အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး၊ frying space က ကျယ် ပြီးအသုံးပြုရတာလွယ်ကူလို့ ပမာဏများများ အမျိုးအစားများများ ကြော်ဖို့အတွက် သင့်တော်ပါ တယ်၊ Flat-bottom fryers က အနယ်တွေကို စစ်ထုတ် တဲ့ နေရာ မပါတဲ့အတွက် ကြော်လိုက်ရင် ဆီပေါ် ပေါ်နေတဲ့ dough-based နဲ့ low-density items တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်၊
၄) Advanced Features - Built-in Thermostat, Oil Change Notification, Easy Drainage System, Multiple Baskets, Oil Filtration System, Automatic Basket Lifts, Energy Efficient စတာ တွေလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့် ပါတယ်၊
၅) Fryer Maintenance
Tanks - အများဆုံးပျက်တဲ့အပိုင်းက Tanks မလုံတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ fryer အောက်ခြေပိုင်းတွေကို ဂရုတစိုက် ကြည့်သင့်ပါတယ်၊
Oil - ဆီရွေးချယ်တာ၊ သန့်ရှင်းတာ၊ လဲလှယ်တာတွေက fryer တစ်ခုရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်၊
Thermostat - Thermostat က အမြဲကောင်းမွန် နေဖို့လိုပါတယ်၊ မီးလောင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်လို့ Thermostat ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရဲ့လားဆို တာ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်၊
Clean the fryer - fryer ကို လိုအပ်သလို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေး ရပါမယ်၊
အထက်ပါအချက်တွေက Deep Fryer တစ်ခု မဝယ် ခင်မှာ ယေဘူယျစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါ တယ်၊ Back To Top | Home
Commercial Dough Mixer Buying Guide
Mixer ဆိုတာ restaurant နဲ့ bakery တွေမှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခုပါ၊ Mixer အမျိုးအစားတွေက အများကြီးရှိတာမို့ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Mixer ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊
Mixer အမျိုးအစားတွေက အများကြီးရှိပေမယ့် ယေဘူယျအားဖြင့် ( ၃ ) မျိုး ခွဲနိုင်ပါတယ်၊
၁) Plantary Mixer - အထွေထွေသုံးနိုင်ပါတယ်၊ Agitator attachments တစ်ခုထက်ပိုပါတတ်ပြီး၊ eggs, cake batter, cookie dough, potatoes, pizza dough တွေ အတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်၊ တစ်ကြိမ်ထဲမှာ ပမာဏ အများကြီးအသုံးပြုဖို့အတွက် မကောင်းပါဘူး၊
၂) Spiral Mixer - bread dough, pizza dough တွေလိုမျိုး တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ပမာဏများများ မွှေနိုင်ပါတယ်၊ mixing tools နဲ့ bowl က တပြိုင်တည်း လည်နေလို့ အပူချိန်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပါတယ်၊ ရောနှောမှုက ပိုပြီးတသားတည်းဖြစ်စေပါတယ်၊
၃) Horizontal Mixer - dough ပမာဏအများကြီးကို မြန်မြန် mix လုပ်ဖို့ အတွက် သုံးပါတယ်၊ တခါပြီးတစ်ခါ ဆက်တိုက် မွှေဖို့အတွက် လည်း သုံး နိုင်ပါတယ်၊ အပူချိန် မြင့်တက်မှုရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်လို့ တချို့ dough တွေအတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။
တစ်မျိုးခြင်းစီမှာ အသုံးပြုမယ့်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး countertop၊ stand၊ floor type ဆိုပြီး အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်၊
အထက်ပါ အဓိကအမျိုးအစားတွေအပြင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာတွေက
- Drive System ( Belt-Driven / Gear-Driven )
Belt Type က slip ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး၊ ပြုပြင်စရိတ်နည်းပါတယ်၊
Gear Type က slip ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပြီး၊ ပြုပြင်စရိတ်များပါတယ်၊
- Mixer Speeds နဲ့ Horsepower တွေက ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ dough အမျိုး အစားနဲ့ပမာဏတွေပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်၊
- Bowl Lift က Manual Bowl Lift နဲ့ Electric Bowl Lift ဆိုပြီး ရှိပါတယ်၊
ဒါ့ကြောင့် Commercial dough Mixer တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်
- ဘာကို mix လုပ်မှာလဲ ?
ကြက်ဥအတွက် mixer နဲ့ bread dough အတွက် mixer မတူပါဘူး၊ absorption rate ကို တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ absorption rate နည်းလေ mix လုပ်ရတာ ပိုပြီး ခက်လို့ power ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်၊
- ဘယ်နေရာမှာ အသုံးပြုမှာလဲ ?
တစ်ချို့ mixer တွေက thick, heavy dough တွေအတွက် ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ချို့ က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး general အသုံးပြုဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်၊ မုန့်လုပ်ငန်းအသေးလေးမှာ သုံးမှာလား ? လုပ်ငန်းအကြီးမှာ အသုံးပြုမှာလား ?
- ဘယ်လောက်ပမာဏ mix လုပ်မှာလဲ ?
တစ်ကြိမ်မှာ ပမာဏ ဘယ်လောက် မွှေမှာလဲ? တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်နဲ့ ပမာဏ ဘယ်လောက် မွှေမှာလဲ?
စတာတွေအပြင် ပါဝင်တဲ့ Accessories and Attachments တွေကို ပါ စဉ်းစား သင့်ပါတယ်၊
အထက်ပါအချက်တွေက ယေဘူယျအချက်တွေဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူတဲ့အခါ ရောင်းချသူ / ထုတ်လုပ်သူ ရဲ့ information တွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်၊
ဖော်ပြပါအချက်တွေက mixer မဝယ်ယူခင် စဉ်းစားသင့်တာတွေပါ၊ ဝယ်ယူဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Back To Top | Home
2020 မှာ ခေတ်စားလာမယ့် စားသောက်ကုန် ထုတ်ပိုးမှုပုံစံများ
1. Technology-Enabled Solutions
Smart packaging က ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပိုးတဲ့ နေရာမှာ နည်းပညာတွေထည့်သွင်းပြီး ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ လတ်ဆတ်မှု၊ pH, temperature, fermentation စတာတွေအပြင် စားသောက်ကုန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှု၊ ပါဝင်ပစ္စည်းစတာတွေကို ထုတ်ပိုးမှုမှာ နည်းပညာတွေထည့်သွင်းပြီး စားသုံးသူကို သိစေတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ဆီမှာ အသုံးမပြုသေးပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာ စတင်အသုံးပြုနေတာကို မိတ်ဆက် ပေးတာဖြစ်ပါတယ်၊
ခုခေတ်မှာ စားသုံးသူတွေက ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို product တစ်ခုဆိုတာထက်ပိုပြီးမြင်ပါတယ်၊ စားသုံးသူတွေက ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ information ထက် စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်လာကြပါတယ်၊
3. Vintage-Inspired Designs
ခေတ်တစ်ခေတ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ ဆက်နွယ် ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Vintage designs တွေက အဲဒီ အကြောင်းအရာ၊ အချိန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေကို ပျော်ရွှင်စေ၊ သတိရစေတဲ့ emotions trigger တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်၊
4. Transparent and Clear Labelling
ထုတ်ပိုးမှုပုံစံနဲ့ စားသုံးသူ တွေရဲ့ အပြုအမူတွေ အပေါ် ပြုလုပ်ထားတဲ့ စစ်တမ်းအရ ၃၈ရာခိုင်နှုန်း သော စားသုံးသူတွေက Transparent package နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုမို ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြပါတယ်၊
5. Increased Portability
ခုခေတ်မှာလူအများစုက အလုပ်ပိုလုပ်လာရတာနဲ့ အမျှ အချိန်တွေရှားပါးလာပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် အလွယ်တကူ သယ်နိုင်၊ ကိုင်ထားနိုင် တဲ့ portable ဖြစ်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာ ကြပါတယ်၊
စားသုံးသူတွေရဲ့ Personal ပေါ်မှာတန်ဖိုးထား ပေးတာ၊ စိတ်ကြိုက် မှာယူစေတာမျိုးတွေကို စားသုံးသူအများစုက တန်ဖိုးထားလာကြပါတယ်၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေအတွက် Personalization က တန်ဖိုးရှိတဲ့ strategy တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
7. Minimal Designs
ခုနောက်ပိုင်း packaging industry က ရှုပ်ထွေးတဲ့ labelling and packaging ကနေ ရှင်းလင်းတဲ့ ပုံစံ ဘက်ကို ပြောင်းလာနေပါတယ်၊ ရှင်းလင်းတဲ့ပုံစံက ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ တန်ဖိုးကို စားသုံးသူတွေ ထင်သာ မြင်သာ ဖြစ်စေပြီးတော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပုံတွေမပါဝင် ပါဘူး၊ ဒါက ခေတ်သစ်ထုတ်ပိုးမှုပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲ လာပါတယ်၊
8. Gradient Colouring
စားသုံးသူတွေကို လေ့လာမှုအရ 70 ရာခိုင်နှုန်းသော စားသုံးသူတွေက ထုတ်ပိုးမှုပုံစံရဲ့အရောင်၊ ပုံစံ၊ ရုပ်ပုံ တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုမိုရွေးချယ် ကြ ပါတယ်၊ ထုတ်ပိုးမှုအရောင်တွေကိုရွေးချယ်ရာ မှာ Gradient Colour ( အရောင်ပြေး ) အရောင် တွေကို အသုံးပြုမှုက ခေတ်စားလာပါတယ်၊ Gradient Colour က စင်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ပိုမိုထင်ရှားစေပတယ်၊
84% သော စားသုံးသူတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် sustainable ဖြစ်တဲ့ထုတ်ပိုးမှုကုန်ပစ္စည်း တွေကို ပိုမိုဝယ်ယူကြပါတယ်၊ recyclable / reusable ဖြစ်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံတွေလည်း ခုနောက်ိပုင်းမှာ ခေတ်စားလာပါတယ်၊
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုအပေါ် စားသုံးသူတွေရဲံ ခံစားချက်က shelf ပေါ်မှာမြင်နေရတာထက် အများကြီးပိုလာပါပြီ၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်ပိုးမှု လုပ်ငန်းအပေါ် နည်းပညာတွေ၊ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ် မှု၊ အဆင်ပြေမှု၊ sustainable ဖြစ်မှုတွေက လွှမ်းမို လာပါတယ်၊
ဒါ့ကြောင့် ပြောင်းလဲလာမှုတွေအပေါ် မျက်ခြေမပျက်ဘဲ အလိုက်သင့်လိုက်ပါ ပြောင်းလဲ နိုင်ဖို့ ဒီ post လေးက အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့ မျှော် လင့် ပါတယ်။ Back To Top | Home
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက် Inventory management
Inventory management က စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ တာရှည်မခံတဲ့ ပစ္စည်းတွေကြောင့် ပိုပြီးအရေးကြီး ပါတယ်။ stock တွေများတာ၊ နည်းတာ၊ waste ဖြစ် တာကို လျှော့ချဖို့အပြင် စားသောက်ကုန်တွေ လတ်ဆတ်နေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုကစပြီး ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ရောင်းချမှု supply chain တစ်ခုလုံးနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တွေ ရဲ့ food safety တွေအတွက် inventory /stock control ကို မှန်ကန်တဲ့အရေအတွက်၊ မှန်ကန်တဲ့နေရာ၊ မှန်ကန်တဲ့အချိန်၊ မှန်ကန်တဲ့ ရှိသင့်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို စနစ်တကျ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။
အခုလို စနစ်တကျ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ..
- ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပိုပြီး ထိရောက်ခြင်း၊
- ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျမ်းမာရေးပြဿနာ တွေကို လျော့ချနိုင်ခြင်း၊
- ထုတ်ပိုးမှု၊ သိုလှောင်မှု၊ ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေ မှာ ပိုအကျိုးရှိပြီး
စရိတ်လျော့ချနိုင်ခြင်း၊ စတဲ့ အကျိုးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ inventory management ကိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ယေဘူယျအား ဖြင့် အပိုင်း ( ၃ ) ပိုင်းရှိပါတယ်၊
၁) အလေအလွင့်ဖြစ်နေတဲ့ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းတွေ၊ နေရာတွေကို မှတ်သားခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ နေရာတွေကို အလွယ် တကူသိနိုင်ပါတယ်၊ ဒီ အချက်တွေကို ရရှိဖို့ အတွက် ပျက်စီးနေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ၊ တဝက်တပြတ် ပျက်စီးသွားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ မရောင်းချလိုက်ရဘဲ ပယ်လိုက်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ စတာတွေကို အသေ အချာမှတ်သားထားခြင်း၊
၂) လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်လုံလောက်တဲ့ stock level ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျော့ချနိုင်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ စျေးနှုန်းကိုလည်း အချိန်ကြာကြာထားရှိနိုင်ခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်တွေကို ပိုမို ဆွဲဆောင်နိုင်စေပါတယ်။
၃) လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ရောင်းချမှု ဖြစ်စဉ်တွေကို ပိုပြီး ညီညွတ်မျှတစေပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း တွေကအစ ထုတ်လုပ်ပြီး၊ ဖြန့်ချီပြီး၊ ရောင်းချနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးတွေကို အလွယ်တကူ track လုပ်နိုင်ပါတယ်၊
Inventory management နည်းလမ်းတွေ၊ tools တွေ၊ software တွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲက စာအုပ်နဲ့ မှတ်သားတာကစပြီး၊ Excel, Google Sheets စတာတွေနဲ့လည်း inventory database ကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထိခိုက်မခံတဲ့၊ ပျက်စီးလွယ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပမာဏအများကြီး ထုတ်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ သဘာဝတွေကြောင့် စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း ရှင်တွေလည်း လုပ်ငန်းအသေးအကြီး မခွဲခြားဘဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ inventory control ကို အသေအချာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ Back To Top | Home
အပြိုင်အဆိုင် ထူးခြားတဲ့ထုတ်ပိုးမှုပုံစံတွေနဲ့ စားသောက်ကုန် တွေကြားမှာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူသူတွေ ရွေးချယ်အောင် အကောင်းဆုံး ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ ?
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုဆိုတာ အခြေခံကကုန်ပစ္စည်းကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုပေမယ့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်က စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အကောင်းဆုံးထုတ်ပိုးမှုပုံစံဖြစ်ဖို့ အတွက် သင့်ကုန်ပစ္စည်းမှာ ခိုင်မာတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကတဆင့် သင့် ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရှင်းလင်းတိကျပြည့်စုံစွာ စားသုံးသူတွေကို ပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကို မစဉ်းစားခင် အောက်ပါ မေးခွန်းတွေကို အရင် ဖြေဆို ကြည့်သင့်ပါတယ် ...
၁ ။ သင့်ကုန်ပစ္စည်းက ဘာလဲ ?
၂ ။ စျေးကွက်ထဲက အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့အချက်ကဘာလဲ ?
၃ ။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ target customer တွေက ဘယ်သူတွေလဲ ?
၄ ။ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အိပ်မက်တွေနဲ့ သင်က စားသုံးသူတွေကို ပြောပြချင်တဲ့ message တွေက ဘာတွေလဲ ?
ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေက သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာတွေကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံအတွက် အရောင်အသွေး၊ အရွယ်အစား၊ ပုံစံစတာတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး အဖြေပါပဲ။
တကယ်တော့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ပိုးမှုပုံစံ ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ safety/protection နဲ့ စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ design တွေရဲ့ကြားမှာ မျှတနေဖို့ လိုပါတယ်၊
ဒါဆိုရင် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးထုတ်ပိုးမှုအတွက် လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တွေက ....
- အသုံးပြုတဲ့ material : ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေက ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ လတ်ဆတ်မှု ကာကွယ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ?
- သင့်တော်လုံလောက်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုအရွယ်အစား : ပြောင်းလဲနိုင်/ပုံသေ ထုတ်ပိုးမှု၊ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြနိုင်ဖို့နေရာ၊ အရောင်းဆိုင်ရဲ့ စင်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုနေရာယူမလဲ ?
- သိုလှောင်မှု၊ဖြန့်ချီမှုတို့အတွက် အဆင်ပြေခြင်း : သိုလှောင်မှု၊ဖြန့်ချီမှုတို့ အတွက် ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များ
- အရောင်းဆိုင်စင်ပေါ်မှာ ကြာချိန် : စားသုံးသူလက်ထဲမရောက်ခင် အရောင်းဆိုင်ရဲ့ စင်ပေါ်မှာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်သလဲ ?
- သတင်းအချက်အလက် : ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ၊ အကျိုးကျေးဇူး၊ သတိထားရမယ့် အချက်တွေနဲ့ သင်ပြောချင်တဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း
- ကုန်ကြမ်းရရှိနိုင်မှု၊ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်၊ အလုပ်သမားလိုအပ်မှု၊ နောက်ထပ် အရောင်၊ ပုံစံ၊ အရွယ်အစား တွေထပ်ပေါင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်ထုတ်ကုန်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ပြိုင်ဘက် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ၊ သူတို့ဘေးမှာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းက ဘယ်လိုနေရာယူမလဲ ? ... Back To Top | Home
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ထုပ်ပိုးမှု နည်းပညာများဟာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင် မှု၊ စားသုံးသူနဲ့ ထုတ်လုပ်သူတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်မှု တစ်ခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။
စားသုံးသူတွေရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်ခံစားမှုမှာ ထုတ်ပိုးမှုက အများကြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။
- ဖွင့်ရတာလွယ်ကူရဲ့လား ?
- အရည်အသွေးကောင်းသေးရဲ့လား ?
- အထဲမှာ ကျိုးပဲ့နေမလား ?
- သန့်ရှင်းမှုရှိရဲ့လား ?
စတဲ့ စားသုံးသူတွေက ထုတ်ပိုးမှုတစ်ခုအပေါ် ခံစားမှုတွေကို လိုက်ပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြပါတယ်။ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အခြေခံအချက် တွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်၊
၁. ကုန်ပစ္စည်းကို ကာကွယ်နိုင်မှု : Product Protection - ( ကုန်ပစ္စည်းကိုကိုင်တွယ်မှု၊ သယ်ယူမှု၊ ဖြန့်ချိမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကာကွယ်နိုင်မှု၊ ထုတ်ပိုးအလွှာများ ) Product Protection ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကုန်ပစ္စည်းကို သယ်ပိုးတဲ့၊ ဖြန့်ချီတဲ့အခါမှာ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် သင့်တော်လုံလောက်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၂. ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှု : Product Safety - ( ထုတ်လုပ်မှု၊ အရည်အသွေး ကုန်ဆုံးမှု ) စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်းအသွေးပျက်စီးမှုက ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း တွေ သယ်ယူချိန်ကစပြီး၊ စားသုံးသူလက်ထဲ ရောက်ရှိချိန်ထိ ဘယ် အဆင့်မှာမဆို ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း တွေက ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချမှုအဆင့်တိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် နိုင်ငံရဲ့ labeling ဥပဒေအရ ထုတ်လုပ်ရက်၊ ကုန်ဆုံးရက်၊ batch ID စတဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ label တစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်။
၃. ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ လတ်ဆတ်မှု : Product Freshness - ( ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အသွင်အပြင်၊ အရသာပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ လတ်ဆတ်မှု၊ အရည်အသွေး ) သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံက ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ သွင်ပြင်၊ အရသာ၊ လတ်ဆတ်မှု၊ အရည်အသွေးစတာတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုက ထုတ်လုပ်ချိန်ကစပြီး၊ စားသုံးချိန်အထိ ရက်ပိုင်းကနေ တခါတရံ နှစ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စားသုံးချိန်ထိ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ လတ်ဆတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ စားသောက်ကုန်တစ်ခုရဲ့ shelf life နဲ့ freshness တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်
- Material : ထုတ်ပိုးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအမျိုးအစား
- Film Barriers : ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပစ္စည်းတွေရဲ့ကြားမှာ ကြားခံလို၊မလို၊
- Resealable packaging : zipper ကဲ့သို့ အကြိမ်ကြိမ် အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သော
ထုတ်ပိုးမှု စတာတွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၄. အမှတ်တံဆိတ်ရဲ့လက္ခဏာများ : Bran Identity - ( အမှတ်တံဆိတ်တစ်ခုရဲ့ အသွင်အပြင်များ၊ လွှမ်းမိုး နိုင်မှု၊ အရောင်အသွေး အရွယ်အစားထင်ပေါ်မှု ) များပြားတဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ကြားမှာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့အတွက် သင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ထုတ်ပိုးမှု idea နဲ့ အမှတ်တံဆိတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေက အရေးကြီးလာပါပြီ၊ မှန်ကန်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုအရွယ်အစား၊ ပုံစံ၊ အရောင်အသွေး၊ ကုန်ကြမ်းတွေကို အသုံးပြုမှုက သင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ တန်ဖိုးကို တက်စေပါတယ်။
အထက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့် ထုတ်ပိုးမှုဆိုတာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို စားသုံးသူနဲ့ ထိတွေ့စေတဲ့ ပထမဆုံးကြားခံဖြစ်ပါတယ်၊ မှန်ကန်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှု ကို အများကြီးအထောက် အကူဖြစ်စေပါတယ်။ Back To Top | Home
Don't forget to join us for new production technology and machinery knowledge. Please join our social community in order to receive technology articles and business knowledge regularly.
Subscribe for news and technology
Please join us our Viber Business Community
Treasure3 Business Community